Buste caag, Sofa barkin, caag qubeyska - Longdian
Raaxo Travel Buste
Coral dhogorta buste Iyadoo Bag
Cheap dhogorta Bustayaal In Jumlada
All Season dibada Travel buste biyaha
2 layers buste
Shaxing longdian qabriga maryo Co., Ltd.
Shaoxing Longdian qabriga maryo Co., Ltd. waa shirkad warshadaha iyo ganacsiga, oo ku yaalla Shiinaha qabriga maryo City-KeQiao Town, Shaoxing, Shiinaha. Shirkadda waxaa la aasaasay sanadkii 2002, magaalada diiwaangashan uu yahay 1,000,000 CNY, taas oo inta badan ay soo saaraan iyo dhar aan dhogorta wax dhoofinta, buste dhogorta, qubeyska, buste geeduhu, dhar iyo wixii la mid ah. All alaabooyinka yihiin raacaan heerarka tayada ee caalamiga ah iyo aad ayay ugu qanacsan in noocyo kala duwan oo suuqyada kala duwan ee dunida oo dhan.
Gadashada Buste dhogorta a
Tallaabada ugu horreysa ee aad iibsanayso buste dhogorta weyn ayaa garanaya sida iyo meesha waxa loo isticmaali doonaa. Dabcan, bustayaal oo isu yihiin iyo in la meel kasta loo isticmaali karaa, laakiin helitaanka xajmiga saxda ah iyo nooca buste si aad u isticmaasho loogu tala galay ay xaqiijin doonaan in aad tahay qof ka dhergiyey aad iibsatay. Naftaada weydii ...
Cinwaankaaga: RM4028-RM4038, North Toddoba Zone, Shiinaha qabriga maryo City, KeQiao Town, Shaoxing City, Shiinaha
Polyester Microfiber Fabric, Flannel Fleece Fabric, jilicsan biyaha Coral dhogorta Fabric , Pv Fleece Fabric,